उद्योगपति भन्छन्: बिजुली नभएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?::KhojOnline.com
अन्तर्वार्ता अर्थ उर्जा
उद्योगपति भन्छन्: बिजुली नभएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?
१५ पुस, काठमाडौं । पत्रपत्रिकामा मन्त्री, नेता र राजनीतिका कुराहरु धेरै आउँछन्, तर उद्योगी-व्यवसायीहरु के गर्दैछन् भन्ने त्यति धेरै आउँदैनन् । भारतीय नाकाबन्दी र मधेसवादी दलको बन्द-हडतालले मुलुकको उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका बेला हाम्रा उद्योगपतिहरु के गरेर बसिरहेका होलान् ?
राजनीतिक अस्थिरताको असर नेपालका उद्योगधन्दामा कस्तो परिरहेको छ र उद्योगपतिहरु के सोचिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन हामीले शंकर ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक शाहिल अग्रवाललाई भेट्यौं । र, उनलाई सोध्यौं, तपाईहरु अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अब मुलुकमा उद्योगधन्दाको हालत कहिले, कसरी सुध्रिएला ?
शाहिल अग्रवाल, प्रबन्द निर्देशक, शंकर ग्रुप
बन्द, हडताल र नाकाबन्दीले शंकर ग्रुपको उद्योग र व्यापारमा कति घाटा पुगेको छ ?
हामीले सञ्चालन गरेका सबै उद्योगहरु लगभग बन्द अवस्थामै छन् । ट्रेडिङ पनि ठप्पजस्तै छ । हाम्रा कुनै उद्योग ५ प्रतिशत चले होलान्, कतिपय १० प्रतिशत । स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योगहरु २०/३० प्रतिशत पनि चले होलान् । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा अधिकांश उद्योगहरु बन्द नै छन् ।
उद्योग नचले पनि कर्मचारीलाई तलव दिनुपर्‍यो, बिजुलीको न्यूनतम डिमाण्ड शुल्क बुझाउनुपर्‍यो । भन्सार नाकाहरुमा धेरै ट्रकहरु अडि्कएका छन् । त्यसको विलम्ब शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । वीरगञ्जमा अडि्कएका कन्टेनर रि-रुट गरेर ल्याउँदा लागत बढिरहेको छ ।
कच्चा पदार्थ भए पनि उद्योग चलाउन डिजेल पाइँदैन । कच्चा पदार्थ भएर मात्रै पनि उद्योग चल्दैनन् । ब्ल्याकमा तेल किनेर उद्योग चलाउँदा लागत उच्च हुन्छ । ढुवानीका लागि ट्रक पाइँदैनन् । ट्रकले पनि महंगो भाडा लिन्छन् । यसले वस्तुको भाउ बढाउँछ ।
यद्यपि अहिले खाने कुराहरुको बिक्री भने राम्रै छ । जे जस्तो भए पनि सबैलाई खानु त परिहाल्छ । आजको दिनमा चाउचाउको माग राम्रै छ । पीठो, चामल दाललगायतका खाद्य वस्तुहरुको माग उच्च नै छ ।
बन्द हडताल र नाकाबन्दीको असर उद्योग व्यवसायमा लामो समयसम्म देखिन्छ । ७/८ महिना डिष्टर्व भएपछि नाकाबन्दी र तराई आन्दोलन रोकिएर भोलिदेखि नै उद्योग, व्यवसाय खुलिहाले भने पनि पुनः नियमित अवस्थामा आउन ४/५ महिना लागिहाल्छ । आज उद्योग व्यवसाय खुल्यो भने भोलिदेखि नै राम्रोसँग चल्छ भन्ने हुँदैन । तत्कालै बन्द खुले पनि यो आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरु घाटामै चल्नुपर्छ ।
शंकर ग्रुपले वाषिर्क रुपमा करिब ६० अर्बको कारोबार गर्छ । बन्द, हडताल र नाकाबन्दीले त्यसमा कति प्रतिशत घाटा लाग्दैछ ?
यो वर्ष हाम्रो कारोबारमा ७० प्रतिशतले गिरावट आउने निश्चित छ । चाउचाउ लगायतका केही उद्योग सामान्य चलेपछि सिमेन्ट, स्टिल, ट्रेडिङ व्यवसाय ठप्प छ ।
विभिन्न उद्योगमा लगानी विस्तारसमेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हस्पिटालिटी उद्योगमा पहिलो पटक प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो । लगानी विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको हो ?
हाम्रो सबैजसो उद्योगहरुमा क्षमता विस्तार भइरहेको थियो । कतिपय उद्योगमा नयाँ लगानी गर्ने योजना थियो । स्टिल उद्योगमा
हाम्रो मुख्य विस्तारको काम भइरहेको थियो, माइनिङमा काम गरिरहेका थियौं । जोइन्ट भेइञ्चरमा हेटौंडामा नयाँ उद्योग स्थापनाको काम भइरहेको थियो । जलविद्युत परियोजना, प्रविधि, कृषि, अटो, हस्पिटालिटी, दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, हेभी इक्वीपमेन्ट लगायतमा लगानी विस्तारको काम भइरहेको थियो ।
भूकम्प, बन्द हडताल र नाकाबन्दीले सबै काम प्रभावित भएको छ । क्षमता विस्तार र नयाँ लगानीको काम रोकिएको छ । होटल निर्माण कार्य रोकिएको छ । होटलको डिजाइनको काम भइसके पनि साइटमा काम सुरु गर्न सकेका छैनौं । बन्द खुलेर सहज वातावरण बनेपछि मात्र होटल निर्माण कार्य सुरु गर्छौं ।
लगभग सबैजसो उद्योगमा लगानी थपिरहेको बताउनुभयो । त्यसलाई थप खुलाइदिनुस् न, कुन उद्योगमा कुन स्तरको लगानी थप्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले करिव ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा स्टिल उद्योगको क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं । काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिमेन्टमा अम्बे ग्रुपसँगको साझेदारीमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै छौं ।
हामीले गएको वर्ष चाउचाउ उद्योगको क्षमता विस्तार गरिसक्यौं । यसमा ७० करोडको हाराहारीमा लगानी थपेका हौं । अझै चाउचाउ उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ ।
जलविद्युतमा हामी १० अर्ब लगानी गरिरहेका छौं । जोइन्ट भेइञ्चरमा हामीले एउटा २० मेगावाटको मोदी, ३६ मेगावाटको बलेफी र ३६ मेगावाटकै आँखुखोला जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेका छौं । मोदीको काम एक/डेढ वर्षमै सकिन्छ । अरु दुई आयोजना पनि निर्माणमा गइसकेका छन् ।
अटोमोबाइल्समा हामी १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजनामा थियौं । टीभीएस मोटरसाइकल नेपालमै एसेम्बल गर्ने हाम्रो योजना छ । पाँचतारे होटलमा हामी ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछौं । दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, यी सबै परियोजना बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण रोकिएका छन् ।
यो असहज परिस्थितिका कारण व्यवसाय बन्द गरेर ब्याक हुनुपर्ने, लगानी नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म यस्तो स्थिति आइसकेको छैन । तर, यही अवस्था भोलिका दिनमा पनि निरन्तर रहृयो भने केही भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म हामी घोषणा गरिसकेको लगानी विस्तारको काम रोक्ने पक्षमा छैनौं । म अझै आशावादी छु, समस्या चाँडै सुधार हुनेछ र लगानीको वतावरण तयार हुनेछ ।
बरु बन्द हडताल र नाकाबन्दीले काममा ढिलाइ भएको छ । होटल प्रोजेक्ट निर्माणको काम पर धकेलिएको छ । तर, ब्याक हुने विषयमा सोचेका छैनौं । अरु प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ, खाली साइटमा मात्र काम सुरु गरेका छैनौं ।
पर्यटन नेपालमा सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपाल ‘कोर स्ट्रेन्थ’ बन्न सक्ने पर्यटन र उर्जामा मात्र हो । अघिल्लो वर्ष करिव-करिव एक मिलियन पर्यटक आएका थिए । भोलि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेपछि पर्यटकको संख्या हृवात्तै बढ्ने छ ।
अझै बन्द हडताल र नाकाबन्दी लम्बियो भने होटलमात्र होइन, अरु प्रोजेक्टको काम पनि रोकिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर, क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीसँग भएको लगानीयोग्य पैसा पनि घाटा पूर्तिमै सकिन्छ ।
उत्पादनशील उद्योग र व्यापारमा जमेको शंकर ग्रुप एकाएक किन पर्यटन उद्योगमा आकषिर्त भयो ?
हामीसँग पूर्वाधार भएमा २० लाख पर्यटक पुर्‍याउन केही गाह्रो छैन । पर्यटकका लागि नेपालजस्तो सुन्दर ठाउँ कहीँ छैन । त्यसो हुँदा पनि नेपालमा हस्पिटालिटी बिजनेश निकै लाभदायक छ ।
काठमाडौंमा स्टार होटलमा जम्मा १७ सय रुम छन् । यो संख्या निकै कम हो । त्यही भएर पनि हामीले होटल खोल्न खोजेका हौं । ग्रुपले ब्यापार विविधीकरण गरिरहेका बेला पर्यटन उत्कृष्ट गन्तव्य हो । यो दीर्घकालमा सबैभन्दा लाभदायक उद्योग हो ।
पछिल्लो समयमा उद्योग सञ्चालनमा धेरै व्यवधान आइरहेको र नाफा पनि घट्दै गएका कारण धेरै ठूला घरानाहरु ब्यापारतिर लागिरहेको भनिन्छ । तपाइहरुको पनि त्यही बुझाइ हो ?
हामी उद्योगबाट व्यापारमा सिफ्ट हुन खोजेका छैनौं । बरु बिजनेशमा विविधीकरण गर्न खोजेका हौं । नेपालमा उद्योग चलाउन आवश्यक कुनै पनि कुराको ‘कोर स्ट्रेन्थ’ नहुँदा उद्योग चलाउन गाह्रो हुन्छ । बिजुली र जनशक्ति हाम्रो कोर स्ट्रेन्थ हो । यसको विकास गर्न सक्यौं भने ठूला-ठूला उद्योगहरु चलाउन सकिन्छ ।
बिजुली नभएपछि उद्योग कसरी चलाउने ? त्यही भएर ब्यापार विविधीकरण गरिरहेका छौं । हामी अहिले पनि उद्योगमा अगाडि नै छौं, ट्रेडिङ व्यवसायलाई पनि त्यसैगरी सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं ।
लामो समयदेखि आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले समग्र उद्योग व्यवसायमा कस्तो असर पुर्‍याएको छ ? यसको क्षतिपूर्ति कसरी होला ?
भूकम्प, बन्द हडताल र नाकाबन्दीले मुलुकको उद्योग व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेको छ । अहिले करिव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । भूकम्प, तराई आन्दोलन र नाकाबन्दी भएको ८ महिना बितिसक्यो । यति लामो समय बन्द भइदिँदा उद्योग र व्यापार दुबैको हालत खराब भइसकेको छ । बजारमा नगद प्रवाह हुन नसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ ।
बन्द हडतालले निजी क्षेत्रमा दुई खर्ब बढी क्षति भएको अनुमान छ, अहिलेको क्षतिबाट बौरिन कति समय लाग्ला ?
यसमा सरकारले अंगीकार गर्ने नीति मुख्य हुन आउँछ । सरकारले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई गति दिनेखालको नीति बनायो भने चाँडै नै अहिलेको क्षतिबाट एक/दुई वर्षमा ‘रि-बाउण्ड’ हुन सकिएला । सरकारले केही गरेन भने अहिलेको क्षतिबाट सामान्य अवस्थामा फर्किन ४/५ वर्ष नै लाग्छ ।
यो पूरै वर्ष उद्योग व्यवसाय घाटामा चलाउनु परेपछि त्यसको असर ठूलो पर्न जान्छ । अहिले त हामीलाई बाँच्नै गाह्रो छ । सरकारले सुविधाहरु दिन थाल्यो, विकास निर्माणमा लाग्यो, बजारमा ‘डिमाण्ड’ सिर्जना गरायो भने हामी चाँडै नै तंगि्रन थाल्छौं ।
यसका लागि सरकारले के-के सुविधा दिनुपर्छ ?
उद्योग व्यवसायको प्रकार हेरेर सरकारले सेवा सुविधा दिनुपर्छ । आज उद्योग व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजि्ररहेका छन् । उद्योग व्यवसायलाई अनुदानहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकको ब्याज तथा साँबा भुक्तानी अवधि बढाइदिन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई चल्ने अबस्था सिर्जना गर्न सरकाले सहुलियत ऋणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । मलाई थाहा छैन, उहाँले कसरी, कहाँबाट ल्याएर बिजुली दिनुहुन्छ । सरकारले एक वर्षमा दिन नसके पनि २/३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरेर ‘सब्सिडी’मा उपलब्ध गराउने हो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो ।
यसैगरी, प्रमुख १० परियोजनाहरु पहिचान गरी तत्कालै निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । भैरहवा एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, निजगढ एयरपोर्ट, फाष्ट ट्रयाक, सुरुङ मार्ग, बुढीगण्डकी जस्ता २/४ वटा हाइड्रो परियोजनाको काम तत्कालै अगाडि बढाएमा निर्माणजन्य सामाग्रीको माग बढ्छ, जसले निर्माणजन्य उद्योगमा धेरै सकारात्मक तरङ्ग ल्याइदिन्छ र बिजनेश साइकल घुम्न थाल्छ ।
सरकार आफै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, धेरै सहयोगको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार होला नि ?
अहिले सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यो कुरा म मान्छु । तर, सरकार समस्यामा छ भनेर यत्तिकै बस्न त भएन । मलाई लाग्छ, सरकारसँग आजको दिनमा दुनियाँभरको पहुँच छ । हामीजस्ता व्यवसायीसँग त कति धेरै पहुँच हुन्छ । सरकारसँग यसको सीमा नै हुँदैन ।
सरकारले चाहने हो भने पैसाको कारणले काम रोकिँदैन । मात्र सकारात्मक सोँचाइ हुनुपर्‍यो । सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा अहिले दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन ।
सरकारले चाहेमा निजगढ एयरपोर्ट आफै बनाउन सक्छ । फास्ट ट्रयाक र दुई/चारवटा ठूला हाइड्रोपावर आफै बनाउन सक्छ । यस्ता आयोजना निर्माण गरेपछि सरकारले कमाइ पनि गर्न सक्छ । सरकारले अरुसँग निर्भर हुनैपर्छ भन्ने छैन । यहाँ लगानी गर्ने मान्छे पनि धेरै छन् ।
बन्द हड्ताल, मजदुरको समस्या र नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएका कारण धेरै उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । तपाईको बुझाइचाहिँ अझै पनि नेपालमा उद्योग राम्रैसँग चलाउन सकिन्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता छ भन्ने हो ?
नेपालमा पूर्णतया स्वदेशी कच्चा पदार्थमा चलेका उद्योगहरु धेरै कम छन् । हामी विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर ‘भ्यालु एड’ मात्र गरिरहेका छौं । कतिपय वस्तुहरु नेपालमा बनाउनभन्दा विदेशबाट आयात गर्दा सस्तो हुन्छ । त्यस्ता वस्तुहरु यहाँ उत्पादन गर्नुको अर्थ छैन ।
उर्जामा हाम्रो भूटानमा जस्तै ‘कोर कम्पिटेन्सी’ भयो भने ठूला-ठूला उद्योगहरु चलाउन सकिन्छ । भूटानमा बिजुलीको मूल्य १ रुपैयाँ प्रतियुनिट छ । हाम्रोमा ७ रुपैयाँ छ । त्यो पनि १२ घण्टामात्र आउँछ ।
उद्योग चलाउन उर्जा, दक्ष कामदार र कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन । बाहिरको कच्चा पदार्थबाट बन्ने वस्तुहरु बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर, यहीँको कच्चा पदार्थबाट चल्ने सिमेन्ट उद्योगहरु राम्रोसँग चलिरहेका छन् । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो लगानीसमेत आइरहेको छ ।
तर, सिमेन्ट उद्योग चलाउन पनि बिजुली नै चाहिने हुँदा हामी समस्यामा परेका छौं । उद्योगमात्र चलाएर जम्न नसकिने हुँदा लगानीकर्ताले ट्रेडिङ व्यवसायलाई सँगसँगै लैजान खोजेका हुन् । कुनै पनि व्यवसायिक घराना उद्योगबाट सिफ्ट भएर व्यापारमा मात्र केन्दि्रत भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
उर्जामा हाम्रो भूटानमा जस्तै ‘कोर कम्पिटेन्सी’ भयो भने ठूला-ठूला उद्योगहरु चलाउन सकिन्छ । भूटानमा बिजुलीको मूल्य १ रुपैयाँ प्रतियुनिट छ । हाम्रोमा ७ रुपैयाँ छ । त्यो पनि १२ घण्टामात्र आउँछ । डिजेलबाट चलाउँदा प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
नेपालमा १०/२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, उद्योगीलाई सस्तोमा बिजुली दिएमा सबैको आकर्षण उद्योगमा हुने थियो । औषत प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा बिजुली किनेर उद्योग चलाउन निकै समस्या पर्छ । त्यसमाथि अहिले त डिजेल समेत पाइँदैन ।
सबैभन्दा पहिला हामीले ‘कोर स्ट्रेन्थ’को विकास गरौं । यहाँ त बिजुली उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला निर्यात गर्ने भनेर बहस चल्छ । १०/२० हजार मेगावाट बिजुली यहीँ खपत गर्न सकिन्छ । मलाई २०० मेगावाट विजुली दिने हो भने ठूला उद्योग लगाउन सक्छु, खै त बिजुली ?
यही कारण हामीले बिजनेश सिफ्ट गरेको नभई विविधीकरण मात्र गरेका हौं । जबसम्म कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन, तपाईं किन त्यसमात्र हाम्फाल्नुहुन्छ र ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा जग्गा दिन्छु, धेरै सेवा सुविधाहरु दिन्छु भनेर घोषणा गरेर लगानीकर्ता आकषिर्त गरे । एकैचोटि उद्योगमा ठूलो लगानी भयो, त्यहाँबाट अहिले वस्तुहरु निर्यात हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण छैन । कसैले पनि तिमीहरुलाई कत्तिको गाह्रो भइरहेको भनेर सोध्न आउँदैन । यस्तो बेलामा कसरी उद्योग चलाउने ? बरु विदेशबाट सामान ल्यायो बेच्यो, त्यही नै सजिलो हुने रहेछ ।
तपाईहरुको लगानीको मुख्य क्षेत्र सिमेन्ट र स्टिल हो । यी दुई क्षेत्रमा नेपाल अब आत्मनिर्भर बन्ने दिशातिर गइरहेको हो ?
सिमेन्टमा हामी करिव आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । सिमेन्ट बनाउन चाहिले कोइला र केही परिमाणमा कंक्रिटबाहेक सबै यहीँ उत्पादन भइरहेको छ । स्टिल पनि यहीँ उत्पादन भइरहेको छ । तर, स्टिल उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालमा अलिकति राम्रो नीति बनायौं भने दुवै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।
यस्तो बेलामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सिमेन्टमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्, भोलि ओभर फ्लो त हुँदैन ?
नेपालमा अझै ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट खपत हुन बाँकी छ । बल्ल हामी पूर्वाधार विकासको चरणमा पुगेका छौं । एयरपोर्ट, सडक, ठूला-ठूला हाइड्रो पावर बनाउनै बाँकी छन् । त्यहाँ ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट खपत हुन्छ ।
हाम्रोमा काठमाडौंबाहेक अरु शहरको विकास भएको छैन । काठमाडौंमा पनि कन्स्ट्रक्सनको ठूलो काम बाँकी छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुँदा सिमेन्टको खपत उच्च हुन्छ । सिमेन्ट उत्पादन बढ्दै जाँदा माग पनि थपिँदै जान्छ ।
सिमेन्ट निर्यातको कत्तिको सम्भावना छ ?
नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना धेरै छ । नेपालसँग जोडिएका भारतीय शहरमा हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिला उर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सस्तो मूल्यमा बिजुली पाइयो भने कम लागतमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतमा भन्दा सस्तोमा यहाँ सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकियो भने सीमावर्ती शहरमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
जुन दिन नेपालमा १०/२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर स्वदेशमै खपत गरिन्छ । त्योबेलामा कसैलाई पनि फुर्सद हुँदैन । बिजुली र मेनपावर भयो भने टेक्नोलोजी जहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ ।
तपाईहरु चाउचाउमा त्यति जम्न नसक्नुभएको हो ?
नेपालमा दुईथरि मूल्यको चाउचाउ उत्पादन भइरहेको छ । एउटा १५ रुपैयाँ र अर्को १० रुपैयाँको । १५ रुपैयाँको चाउचाउ काठमाडौं लगायतका ठूला शहरमा मात्र खपत भइरहेको छ । १० रुपैयाँको चाउचाउ ग्रामिण भेगसम्म पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा वाईवाई चाउचाउ नै बढी खोज्छन् । तराई र पहाडी भेगमा हामी एक/दुई नम्बरमा छौं ।
आजको दिनमा नेपालमा हामी नम्बर ३ पोजिसनमा छौं । हाम्रो चाउचाउमा मार्केट शेयर १५ देखि १७ प्रतिशत छ । हाम्रो महिनामा ६० लाख कार्टुन चाउचाउ उत्पादन भइरहेको छ । हामी विस्तारै काठमाडौंमा प्रवेश गरिरहेका छौं । बन्द हडताल र नाकाबन्दीपछि हाम्रो चाउचाउ काठमाडौंमा ६० हजार कार्टुन बिक्री भयो ।
आगामी दिनमा तपाईहरुको प्राथमिकता क्रमिकरुपमा कुन-कुन क्षेत्रमा हुनेछ ?
आगामी १/२ वर्ष हामी अरु क्षेत्रमा छिर्दैनौं होला । किनभने हाम्रो पहिले नै धेरै बिजनेश छ । यसैलाई विस्तार गर्ने काम तिब्ररुपमा भइरहेको छ । यसैलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।
भोलिका दिनमा हाम्रो इच्छा शिक्षा र हस्पिटल क्षेत्रमा लगानी गर्ने रहेको छ । यस क्षेत्रमा कहीँ न कहीँबाट प्रवेश गरौं कि भन्ने सोच छ । तर, तत्कालै हात भने हाल्दैनौं । २/३ वर्षपछि स्थिरता आएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । यो सामाजिक क्षेत्र पनि हो ।